Liyuu Police-kii Harar oo Hubka laga dhigay iyo milateriga oo magalada Lawareegay. | ogaden24
Liyuu Police-kii Harar oo Hubka laga dhigay iyo milateriga oo magalada Lawareegay.
Mar 12, 2019 - Aragtiyood
Dawlada deegaanka hararida oo ah deegaan kukooban magaalada Harar oo kaliya ayaa ah deegaanka ugu tirada iyo baaxada yar guudahaan 9ka dawlad deegaan ee dalka itoobiya,waxaana gundhig u ah qoomiyada Harida ama Adarida sida ay soomaalidu utaqaano.
Deegaanka oo ay kuhareeraysan yihiin tuulooyin iyo degmooyin katirsan deegaanka oromada ayaa ah mid maamulkiisa ay Oromadu qayb kuleedahay arintaasoo sababtay inay qoomiyada oromadu kudhex milanto haayadaha amaanka deegaanka halka 85% ciidanka booliska gaarka ah ee magaalada ay xubnihiisu kasoo jeedaan qoomiyada oromada.
Dhankakale magaalada waxaa kuyaala saldhigyada ciidanka milatariga itoobiya kuwooda ugu waawayn.
Tan iyo intuu isbadalka siyaasadeed kadhacay dalka itoobiya waxaa magaalada kajiray xaalad amni xumo oo aad uliidata waxaana guudahaanba meesha kabaxay nidaamkii iyo kala danbayntii kadib markii ay magaalada kusoo bateen kooxo dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qoomiyada oromada kuwaas oo bar tilmaameed sanaya guryaha iyo ganacsiga qoomiyada Hararida sheeganayana inay dhulka iyagu leeyihiin.
Waxaa dhdeegaankaqoysas aad utiro badan xoog lagaga qaatay guryohoodii halka qaarkale ay cabsi ugasoo carareen kadibna sifo sharcidaro ah lagu dagay.
Waxaa intaasi dheer in haayadaha amaanka deegaanku gaarahaan ciidanka booliska gaarka ah uu noqday mid garabsiiya kooxahan bulshada dhibaatada kuhaya waxaana xusid mudan in xitaa ay gaadheen inay jidhdilaan komishinka booliska magaalada oo isagu Harari ah waxayna sidookale dhawr todobaad kahor dajiyeen calankii deegaanka Hararida iyagoo kubadalay midka deegaanka oromada.
Kadib markay arintu faraha kabaxday islamarkaana ay booliskii loo tababaray sugida amaanku noqdeen kuwo iyagu dhibaatada qaybka ah ayay xukuumada deegaanku go,aamisay in guud ahaanba hubka laga dhigo booliska gaarka ah (liyuuga) iyo booliska caadi ahba waxaana amaanka magaalada guudahaanba lagu wareejiyay ciidanka milatariga iyo booliska federaalka.
Ahmed Yussuf oo ah hogaanka Nabadagalyada Hararida ayaa cadeeyay in guudahaanba hubka laga dhigay ciidankii booliska ahaa isagoo intaasi raaciyay in laxareeyay islamarkaana lasiindoono tababar iyo cashiro 2 todobaad qaadanaya balse hogaanku mauusan cadaynin in ciidanka liyuuga ah lasoo celindoono tababarka kadib iyo inkale balse warar hoose ayaa sheegaya inaan lasoo celin doonin oo sidaas lagu kala diriyo.
Talaabadan ayaa ah mid ay aad usoo dhaweeyeen shacabka qoomiyada Hararidu.